Milateriga Sacuudiga iyo Xuuthiyiinta oo is duqeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Milateriga boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo maleeshiyada Xuuthiyiinta ayaa gentaalo iyo madaafiic culus maanta isku dhaafsaday soohdinta labada dal, iyadoo duqeynta xagga cirka ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta, islamarkaana uu Sacuudiga horkacayo ay gashay maalintii 6-aad.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa dad degan soohdinta labada dal kasoo xigatay in qaraxyo iyo rasaas xoog leh laga maqalay deegaanada Shadaa iyo Al-xasaama ee gobolka Sacdah.
Sidoo kale, waxaa qaraxyo waaweyn oo ay labada dhinac is weydaarsadeen laga maqlay tuulo ku taalla deegaanka Xirdi ee gobolka Xijah oo iyaduna soohdinta ku dhow.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay iney arkeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Sacuudiga oo dul heehaabaya deegaanada madaafiicda la isku dhaafsaday.
Dadka deegaanku waxey xuseen in is-duqeynta maanta ka dhacay gobolka Sacda ay tahay tii ugu kululeyd tan iyo markii 5 maalmood ka hor Sacuudiga iyo xulafadiisu weerarka xaaga cirka ku bilaabeen Xuuthiyiinta Yemen.
TV-da Almasiirah ee ku hadla afka Jabhadda Xuuthiyiinta ayaa tebiyey dagaalka ka dhacay xadka Sacuudiga iyo Yemen, wuxuuna xusay in duqeyn ka imaaneysa gardarrada Sacuudiga iyo Mareykanka ay ku socdaa deegaanada Shadaa iyo Alxasaama ee xadka labada dal, sida warka loo dhigay.